Uyenza njani inombolo 1 ngonyaka ukusuka kwi-napkins? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokwenza inombolo ye-1 ngomnyaka ngee-napkins?
Ukuze ungachithi imali eninzi ukuthenga imihlobiso eyahlukeneyo yokuzalwa komntwana ononyaka ubudala, unokwenza yonke into ngama napkins. Ukwenza oku, iipakethe ezimbalwa zeepenki ezinemibala eyahlukeneyo + kunye nexesha elincinci kunye nomzamo ziyafuneka.
Emva kwexesha kuya kufuneka ufumane eli nani:
Okokuqala kufuneka wenze isakhelo esiqinileyo senani 1 ukusuka kwikhadibhodi. Unokwenza umzobo ube ngumthamo okanye uflethi.
Kuwo nawuphi na umzobo, umzobo uya kujongeka uthobekile.
Emva koko, ukusuka kwi-napkins sisenza iintyatyambo ezincinci, esiya kuthi kamva sibhinqe kwikhadibhodi ngekhonkco.
Ukwenza intyatyambo, kufuneka ugobe ipani kangangezihlandlo ezininzi ukwenza isikwere. Okulandelayo, embindini kunye ne-stapler sibambezela i-napkin. Sika isangqa ukuze uqhagamshelo lwebakaki lube embindini. Yahlula-hlula amacwecwe kwaye ugxobhoze amanani kwikhadibhodi engenanto.
Unokuvavanya kancinane ngeengqengqele ezinemibala eyahlukeneyo ukwenza umzobo ubengombala.
Umhla wokuqala wokuzalwa ebomini bam ngowona msitho ubaluleke kakhulu, ingakumbi kumama notata.
Kwaye ufuna ikhekhe lakho elincinci elihle, kwaye uyihombise itafile negumbi, kwaye unxibe umntu omhle wokuzalwa ukuze yonke into ikhunjulwe kwaye zonke iitotshi ziphumelele.
Enye yezona zinto zidume kakhulu zokuhlobisa zomhla wokuzalwa iyunithi yevolumu.
Ingenziwa lula ekhaya ukusuka kwiindlela eziphuculweyo.
Ukuze iyunithi ivuleke unyaka wonke ibe mhle, sidinga iibhokisi zekhadibhodi kuphela, iipenki ezinemibala, isitya sefenitshala, isikhafu kunye neteyinti yokunamathela.
Okokuqala, senza iyunithi yinye yeyunithi kwikhadibhodi.
Ukwenza oku, kufuneka sidwebe kwaye sisike iiyunithi ezi-2, emva koko zibaxhuma kunye nomxokelelwane wekhadibhodi, oya kuthi unike ubungqingqwa, ubambe yonke into ngetape duct.
Ukuhlobisa iyunithi, kufuneka wenze inani elikhulu leepompom ezivela kwi-napkins.
Oku kulula ukwenza ngokweskimu sefoto apha ngezantsi.
Okulandelayo, sibopha ngokukhawuleza iipompon kunye nesitayile sefenitshala kuyilo lweyunithi.
Yonke into, enye yonyaka, ekhanyayo kwaye intle, ilungele!
Ukuhonjiswa okumnandi kwasekuqaleni kweholide yabantwana ngendlela yenani elinye. Ukuze uyenze udinga ikhadibhodi yesakhelo kunye ne-napkins, iipaneli ezininzi kunye neglue. Kufuneka wenze iintyatyambo ezintle kwaye uzinamathele kwisakhelo.
Inkqubo yokudala inokubonwa kwividiyo.
Uyenza njani inombolo 1 yonyaka ukusuka kwi-napkins - inyathelo ngemiyalelo yenyathelo
ikhadibhodi (ngokukhethekileyo ibhokisi enkulu yezixhobo zekhaya);
iipenki zamaphepha zombala oyifunayo;
Ukuqala, zoba umfanekiso weyunithi kwikhadibhodi kwaye uyisike. Kwiphepha lesibini lekhadibhodi sijikeleza umzobo kwaye siyisike.
Njengodonga olusecaleni, ii-rectangles eziqhelekileyo kunye nekhadibhodi ekwizixa ezili-11 zisetyenzisiwe. Emva kokuvelisa onke amalungu, qokelela inombolo 1 usebenzisa itayile eqhelekileyo okanye imaski.
Ukwenza inxalenye egobileyo, ngasemva kwekhadibhodi kunye nasetiyipini, kuya kufuneka wenze iindlela ezimbalwa zokusika. Ke, ikhadibhodi iya kuba lula ukugoba.
Ukwenza iintyatyambo, ipenki nganye ifuna ukuba ifoldwe ngesiqingatha, kwaye emva kwesiqingatha, kwaye ibambe ngokuqinileyo ngesakhiwo nge-stapler. Ukusuka kwisikwere esisiphumo, sika isangqa.
Kwisangqa, siphakamisa zonke izendlalelo phezulu, sishiya enye kuphela.
Ngokufanayo, sivelisa inani elinqwenelekayo leentyatyambo (malunga ne-4-5 iipakethi zee-napkins, kuxhomekeke kubungakanani benani).
Iintyatyambo ezilindelweyo glue inani.
Umntwana wakho sele eneminyaka eyi-1 ubudala kwaye usuku lokuqala lokuzalwa kufuneka lukhumbuleke. Nxiba igumbi leholide kunye nefoto. Isisombululo esigqibeleleyo kuya kuba kukwenza iyunithi enobunewunewu yeearhente.
Ukuba uyazama, unokwenza iiyunithi zamaplanga ngezandla zakho. Ukwenza oku, uya kudinga ikhadibhodi, iglu, iipakethe ezininzi zemibala eyahlukeneyo, ityhubhu lokuhomba.
Senza ilize yeyunithi yethu ngekhadibhodi. Ubungakanani bayo bunokwahluka, kuxhomekeke kwimpembelelo ofuna ukuyiphumeza.
Unako, kunjalo, ukwenza umzobo ube mthebelele kwaye uqhoboshele eludongeni, ngokuba ifoto iya kuyenza.
Kodwa inani levolumetric libonakala linomtsalane ngakumbi. Kodwa oku kufuneka unike ioyunithi yethu, uyisonge ngeglue masking tape. Ngenxa yoko, kuya kufuneka ufumane into enjengale uyilo.
Ngoku siza kwenza iintyatyambo ezivela kwi-napkins. Kuya kufuneka usongele i-napkin izihlandlo ezininzi kwaye ubambe ngakumbi phakathi kunye nesitayile. Emva koko, usike isangqa kwibhokisi etyheliweyo. Umaleko ngamnye wentyatyambo yethu usuka kwilaphu, kuya kufuneka usike kancinci kumda, ungabi ngaphezu kwe-3 yeemilimitha. Ngoku nganye ungqengqelo lwe-napkin kufuneka luphakanyiswe kwaye luflatwe kancinci, lushiye ungqimba olusezantsi nkqu nokugcwala.
Okulandelayo, kuya kufuneka upende iipaleji ukuze ufumane intyatyambo. Ngoku ihlala kuphela yokuncamathela kwiintyatyambo kwikhonkco lethu leyunithi, kuyo yonke iparameter, ngaphandle komgangatho wokuqala. Nanku umfanekiso kwaye ulungile. Iyunithi ukukhanya, ukukhanya kwaye mhle kakhulu.
Ukwenza inombolo 1 ukusuka kwi-napkins ngegama lomntwana wentombazana okanye unyana, kufuneka uqale usike isakhelo kwikhadibhodi. Ndiyakucebisa ukuba usebenzise imibala eyahlukeneyo yamapenana - iya kuba ntle ngakumbi.
Xa usika isakhelo, khawula iipaneli zibe ngamaqhezu amancinci, phawula ebhokisini apho unokuthi glue ngowuphi umbala kunye nokusebenzisa i-PVA (okanye nangcono - usebenzisa umpu omdaka) glue iiapilethi kwikhadibhodi. Ke, unokudala ubuhle obunje:
Inani le-napumetric ye-napkins ingaba sisisombululo esifanelekileyo seholide yabantwana. Ukuveliswa kwayo kuya kubiza iindleko ezingabizi, kufuneka ikhadibhodi kuphela (ungathatha ibhokisi ephantsi kwezixhobo zasekhaya), ityhubhu yes scotch, macala omabini acekeceke, kunye neepakethe ezininzi zalahlwa. Kule vidiyo ungabukela yonke inkqubo yokwenza ubucwebe bokuqala.
Unokwenza izinto ezininzi ezinomdla kumbhiyozo wosana lwakho. Ke, umzekelo, unokwenza umhle kakhulu, ubume obunobukhazikhazi nobukrwada kakuhle usebenzisa nje i-napkins eqhelekileyo yemibala eyahlukileyo njengomhlobiso.
Kuqala yenza itemplate enje kwikhadibhodi:
Emva koko, qalisa ukwenza iintyatyambo kwezona zidalwa ziqhelekileyo:
Kwaye ngoku, usebenzisa iglu, uncamathisele iintyatyambo zenani elinje.
Inombolo 1 ukusuka kwi-napkins yenziwa ngokulula, kodwa ixesha elide. Unokwenza isiseko seflethi esisiseko esenziwe ngekhadibhodi kwaye unamathisele ngaphezulu ngeentyatyambo ezivela kwi-napkins, okanye unokwenza isambuku kwaye unamathisele ngapha nangapha amacala.
Ngomhla wokuqala wokuzalwa komntwana, mna nomyeni wam senza umzobo kathathu womfanekiso obonisa iifoto kunye nokuhonjiswa kwebar yeelekese.
Intombazana yethu encinci yasinda kwisithombe se-studio esithunzini, iifoto esitratweni kwaye, ngenxa yoko, zahlobisa itafile emnandi.
Isiseko senziwe ngekhadibhodi ehlanganisiweyo. Uzinzo, iiplaji zekhadibhodi zongezwa kwisiseko, kunye neesylfrical stiffeners ngaphakathi, ukuze umzobo ungatyibiliki xa ucinezelwe. Ukulungiselela lula, umngxunya omncinci unqunywe ngasemva.
Zonke iinxalenye zekhadibhodi zadityaniswa ngesibhamu eshushu. Emva koko bancamathisela ngee napkins ezandisiweyo ukuze ikhadibhodi ingakhanyi phakathi kweentyatyambo. Iintyatyambo ezivela kwi-napkins zenziwe ngendlela elula, njengale vidiyo:
Imibuzo ye-60 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,383.